Iphephadonga le-3D le-Android, elinomtsalane! | I-Androidsis
Los amaphephadonga amnandi, eyaziwa ngegama layo ngesiNgesi njengemifanekiso yamaphephadonga, yile mifanekiso esiya kuyibona ngamakhulu amaxesha ngamaxesha. Ngeso sizathu ndihlala ndenza ukuba iikhompyuter zam zitshintshe iyure nganye kwaye nakwizixhobo zam eziphathwayo ndiye ndizitshintshe ngesandla ngalo lonke ixesha elincinci. Sinokusebenzisa nantoni na, njenge 3d iimifanekiso, Oko akuthethi ukuba bayayishiya ikhusi, kodwa ziyilo ezilinganisa zinobunzulu obuthile.
Kweli phepha uyakufumana uninzi kwaye ulunge kakhulu, ukuqala ngolunye igalari enemifanekiso ukuba siqokelele kwakudala kwaye sagqiba ngewebhusayithi ezininzi apho ngokuqinisekileyo uya kufumana uyilo oluthandayo. Apha ngezantsi unegalari enemifanekiso ebendithetha ngayo ngaphambili kunye namaphepha ewebhu apho uza kufumana ukhetho oluninzi.
1 Igalari yamaphephadonga e-3D
2 Amaphepha apho unokufumana khona i-3D yamaphephadonga
2.1 Imifanekiso ye-HD
2.2 Iiphephadonga eziBanzi
2.3 Iimifanekiso ze-FX
2.4 Imvelaphi ye-HD Wallpaper
Igalari yamaphephadonga e-3D
Amaphepha apho unokufumana khona i-3D yamaphephadonga
HD Wallpapers yiwebhusayithi apho siza kufumana khona amaphephadonga amaninzi. Phakathi kwemali ebonelelwe yile webhusayithi, kwaye esi sizathu sokuba ibandakanyiwe kolu luhlu, kukho icandelo elinalo imvelaphi engaqondakaliyo kunye ne-3D. Ngokwam, ndingathanda ukuba zombini ezi ngcinga zohlukane, kodwa ke, kuyinyani ukuba kukho ezinye izifinyezo ezinomdla kakhulu ekufuneka uzibonile.
Into endiyithandayo kakhulu kwiwebhusayithi ye-HD Wallpapers kukuba ngasekhohlo sinokhetho lokukhetha ukuba sifuna ukuba njani ifomathi yomfanekiso, apho sinokukhetha imvelaphi yezixhobo zefowuni okanye kwi-HD.
Qhagamshela kwimvelaphi ye-3D gcokza
Ngokwenyani yonke into esele siyithethile malunga ne-HD Wallpapers isebenza kwiwebhu yeWide Wallpapers. Ewe, andinakuba nalo ukhetho emehlweni (nangona kunjalo) ukuya ngqo kwifomathi ethile yomfanekiso, kodwa ndiyacinga ikhathalogu yale webhusayithi yesibini, ubuncinci ngokwe-3D, kunjalo ephezulu kakhulu yewebhu endiyibeke kwindawo yokuqala. Nangona olo luluvo lwam. Jonga kwaye uza kubona.
Qhagamshela kumxholo we-3D yamaphephancwadi.com
Iphepha elihlaziywa kakhulu elinomxholo omninzi, nangona eli candelo limisiwe ukusukela ngaphambi kwehlobo, ziiFree Wallpapers FX. Inye Icandelo elinemvelaphi emininzi ye-3D, nangona uninzi lwazo lukhoyo yimifanekiso yokwenyani. Ewe imifanekiso eyiyo yenziwa ukuba ibonakale ngathi iphuma kwiscreen sesixhobo sethu. Ngamafutshane, enye iwebhusayithi ekufanele ukuba uyithathele ingqalelo ukufumana imali ye-android yethu encinci.
Amaphephadonga amaninzi e-3D kwi lodonga.com
Imvelaphi ye-HD Wallpaper
Ukuba into oyifunayo yimifanekiso emininzi kangangokuba ungalahleka, into oyifunayo ibizwa ngokuba yi-HD Wallpaper Backgrounds. Iphepha lewebhu elinayo amacandelo amaninzi kwaye nganye inikezela ngeemali ezininzi. Oku kuyasebenza nakwimifanekiso yamaphephadonga e-3D, apho, umzekelo, sinamacandelo efoto kwiikhompyuter, imvelaphi ye-HD, imvelaphi yeentyatyambo, iifoto (eziluhlaza kunye nobomvu) okanye iimilo, konke oku kungasentla kwi-3D.
Ukuba ucinga ukuba sigqibile ngamaphepha, ubuphosakele. Izinketho azizange zibuhlungu kwaye i-WallpaperStop yenye enye enika i imifanekiso eyahlulwe ngamacandelo I-Abstract, ubuGcisa beDijithali, iFantasy, iFractal kunye neVector. Kumacandelo angaphambili, izinto endizithandayo zezomxholo kunye nokuqhekeka.
ikhonkco | lodonga.com
Ayizizo zonke izinto eziza kuba ngamaphepha esiNgesi, akunjalo? Siphela ngeFonditos, iphepha lewebhu ngeSpanish apho sinemvelaphi ye-3D eyahlulwe ngamacandelo, kule meko zizilwanyana, iiNdawo zokuHlahla, iiMpawu, iiRobhothi, iiMoto kunye nabanye.
Ewe, ngokobuqu ndiza kubanika impama encinci esihlahleni kuyilo lwewebhu; Ndikhetha ukuba imifanekiso ibonwe ngaphandle kokungena kuyo.
Isixhumanisi | www.zindaxin.com